LP – Foundation – Auston College Myanmar
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း သို့ O Level အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အခုဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ ဆိုတော့
Auston ကိုထူးခြားသွားစေတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်ရိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာ အားစမ်းစစ်မှုကို အခြေခံ၍ သင်ကြားခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်ကြားမှုစနစ်ဟာ လက်တွေ့ဘဝပုံစံတူ ပြဿနာများဖန်တီး၍ စမ်းစစ်လေ့လာစေခြင်းဖြင့် သင်ယူစေတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် Auston ကနေဘွဲ့ရသွားတဲ့ အခါမှာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်ရောက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တာထက်ကို ပိုမိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလည်းဆိုတာကို ဘယ်လို အဖြေရှာကြမှာလဲ။ ဘယ်အရာကအချက်အလက်။ ဘယ်အရာက ထင်မြင်ချက်။ ဒီဘာသာရပ်က အပေါ်ကချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး နည်းစနစ်ကျကျ သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Foundation programmes တွေက တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာအဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ဲပြီဆိုရင် လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအချိန်ကုန် စရာမလိုတော့ပါဘူး။
WALL STREET ENGLISH®
Auston တစ်ခုတည်းမှာပဲ တက္ကသိုလ်အတွက်ပြင်ဆင်ရင်း ဘဝအတွက်ပါ Wallstreet English Language preparationကိုပါဆည်းပူးပြင်ဆင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝကို ပြောင်းလည်းပေးနိုင်မဲ့ ဘာသာရပ် ၁၀ ခု ကို ၁၅ ပတ် အတွင်းမှာသင်ကြားပေးမယ့် ထူးခြားတဲ့ Programme ဖြစ်ပါတယ် ။
1. Critical Thinking & Analysis
2. Pre University Math (Advanced Math)
5. Personal Psychology for Higher Education
7. Technology Induction
8. My First CV
9. Digital and Global Careers
Auston Institute of Management သည် ၁၉၉၆
ကျောင်းသူများကို အင်ဂျင်နီယာ ၊ IT နှင့်
နည်းပညာဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု နယ်ပယ်များတွင်
Auston သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ISO 9001:2008 နှင့် EduTrust ၄ နှစ်ရရှိထားတဲ့ ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
လက်တွဲချိတ်ဆက်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ — De Montfort University,UK (EEE, Mechatronic, Computer Security) နှင့်
– University of West England, UK (Construction Project Management)
တို့သည်လည်း အရှေ့တောင်အာရှအတွက် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည် နက်နဲသောနည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ နှင့် စိန်ခေါ်မှုနယ်ပယ်များတွင် ကျောင်းသားကောင်းများမွေးထုတ်ပေးနိုင်သော ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဟောင်းတွေကတော့ အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
After enrolled at Auston, I have gainedabetter confidence in myself as all the lecturers are very skillful and good mentors. For me and my friends, we especially enjoyed the critical thinking subject as it broadens my abilities in thinking, team working, and helps me to communicate better with all parties. I would recommend anyone who would like to pursueacareer in Engineering and technology to enrol in Auston College Myanmar.
Chaw Thitsar Lwin
Auston Foundation Programme, October 2018
I joined Auston College Myanmar because I wanted to improve my Cyber Security Awareness. This isamajor challenge currently in our country and I want to buildamore secure network for the future of Myanmar. For me, Auston was the college that would take me there.
Auston Foundation Programme, July 2018
By attending at Auston College, I now have more knowledge than before. New knowledge includes how to use Google Classroom, how to think logically, how to write sentences correctly, and how to get more experiences, like outdoor experiences, and how to work with teams and so on.
I love to create things and that’s why I’m going on to the Diploma in Engineering Technology.
Auston is very easy to approach. They really take good care of us. Every day, they give usamorning call to be on time for the classes.. The lecturers at Auston are very easy to approach and I feel at ease when talking with them for I know that they will help me, guide me and nurture me to fulfill my dreams.
Paing Thwin Moe
Auston Foundation Programme , July 2018
Check If You Are Eligible To Join
ဒီဖောင်လေးကို ဖြည့်ပြီး လေ့လာလိုက်ပါ။